▷ Cyber ​​​​Isniinta Xbox Live Blog: Shidaalka, Ciyaaraha iyo Agabka - 【Isbarbardhigga】 2022
Cyber ​​​​Isniinta Xbox Live blog: dib u soo celinta, ciyaaraha, iyo agabka
Waad ogtahay in daqiiqada ceebta ah ee aad saaxiibo ku leedahay ay u yimaadeen inay ciyaaraan ciyaarta Xbox couch co-op sida Overcooked, kaliya si aad u ogaato inaadan haysan koontaroolo ku filan qof walba. "Waan ka xunahay Jess, waxaad la wadaagaysaa kontaroole Matt."
Hagaag, sida ugu fiican ee looga fogaado xaaladahan oo kale waa in gacanta lagu hayo xakamaynta ciyaarta Xbox. Nasiib wanaag, waxaa jira heshiisyo badan oo Xbox Cyber ​​​​Monday ah oo ah kontoroolayaasha isniinta oo ku saabsan qaar ka mid ah gamepads-dhamaadka sare hadda, markaa waxaa laga yaabaa inaad martida siiso heerka oo aad naftaada u badbaadiso kuwa ugu xiisaha badan.
Fantastik ah Xbox Elite Series 2 Wireless Controller waa run ahaantii € 139.99 dukaanka rasmiga ah ee Microsoft, waxaad kaydisay € 40. Anigu shakhsi ahaan waxaan isticmaalay Taxanaha 2 waxaanan dhihi karaa waa kan ugu fiican Xbox kantaroolka halkaas, kaas oo ka shaqeeya labadaba Xbox One iyo Xbox Series X / S.
Waxa kaliya oo ay dareemeysaa qiimo sare, ka culus kan caadiga ah ee Xbox Wireless Controller, oo leh xulashooyin badan oo habeyn ah. Laakin Taxanaha 2aad waa qaali.
Si kastaba ha noqotee, Razer Wolverine Ultimate sidoo kale waa la dhimay iyo beddelka ka jaban haddii aad rabto inaad si dhab ah uga dhigto koontaroolahaaga Xbox laakiin aadan rabin inaad u daadiso wax ka badan $ 100 ee Elite Series 2.
Qiima dhimista €159.99 ilaa €99.99 ee Best Buy, Razer Wolverine Ultimate waxa uu leeyahay suunka farxada la isweydaarsan karo iyo suufka jihada, badhanka dib u habeynta, iyo dejinta kicinta si si buuxda loogu habeeyo maamulaha si ay kuugu habboonaato.
Ma khaldami kartid mid ka mid ah darawaliintan.
Haddii aad raadinayso qiimo dhimis mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan Xbox Series X headsets, waxaad tahay nasiib.
Waqtigan xaadirka ah, Amazon ee Maraykanka wuxuu hoos u dhigay EPOS H3 madax-madaxeed €12, hoos u dhigista qiimaha laga bilaabo € 99,99 ilaa € 87 ka sii dheefshiidka.
EPOS H3 waa madax-madaxeed raaxo leh oo qurux badan oo wadada ka baxsan oo ka shaqeeya Xbox Series X / S, laakiin sidoo kale la jaan qaadaya PS5, Switch, PS4, iyo Xbox One. Dib u eegistayada EPOS H3 waxaan ku niri:
"EPOS H3 waa taleefoon-madaxeed aad u raaxo leh oo bixiya dhawaaq tafatiran oo dheeli tiran. In kasta oo loogu talagalay ugu horreyn ciyaaraha, waxaan helnay nafteena oo raadineysa H3 si aan u dhageysto heesaha aan jecelnahay, taas oo caddaynaysa tayada codka. Haddii aad raadinayso sameecado xadhig leh oo ka shaqeeya dhammaan qaybaha muhiimka ah - tayada codka, raaxada, iyo isgaadhsiinta cad - EPOS H3 kuma dayn doono. "
Waxay u muuqataa mid wanaagsan soo maaha? (Ma fahantay?)
(Sumcada Sawirka: laba jibbaar)
Psychonauts 2 waa ciyaartayga gaarka ah ee sanadka. Hubaal, dagaalku wuu yara cakiran yahay, laakiin waa madal hiwaayad leh oo qurux badan oo carrabka ku jirta (laakiin kicinaysa) kaas oo ku siin doona inaad ku kasbato hal daqiiqo ka dibna ku xigta.
Nasiib wanaag, tani Psychonauts 2 koodka dhijitaalka ah waa 30 euro oo ka baxsan Walmart hadda, si aad u iibsan karto Double Fine set oo ah kaliya € 29.99.
Heshiis wanaagsan, fikradayda. Sidoo kale, koodkan wuxuu ku shaqayn doonaa Xbox One iyo Xbox Series X/S consoles-yada, marka xitaa haddii aad mar dambe cusboonaysiiso, wali waad ciyaari kartaa.
(Sumcada sawirka: Microsoft)
Hagaag, farsamo ahaan tani ma noqon karto heshiis Cyber ​​​​Isniin ah, laakiin wali way fiican tahay.
Macaamiisha cusub ayaa hadda heli kara bisha ugu horreysa Xbox Game Pass Ultimate kaliya € 1/€ 1 Microsoft hadda. Adeegga is-diiwaangelinta ciyaarta ee qaabka Netflix ee Microsoft ayaa la xaqiijiyay inuu yahay qiimo aad u wanaagsan oo lacag ah sannadihii u dambeeyay, iyadoo maktabaddu ay sii waddo kobcinta sii deynta cusub iyo kuwa ugu cadcad ee lagu daray dhowrkii toddobaadba mar.
Shakhsi ahaan, waxaan u maleynayaa in tani ay tahay diiwaangelinta ciyaaraha ugu fiican hadda.
Isdiiwaangelinta Xbox Game Pass Ultimate, waxaad helaysaa (qoto dheer) gelitaanka 100+ ciyaarood ee maktabadda Xbox Game Pass ee PC iyo console, gelitaanka ciyaaraha Xbox ee iska leh ee soo degaya maktabadda laga bilaabo maalinta koowaad, gelitaanka ciyaaraha daruuraha Xbox, qiimo dhimis xubnaha gaarka ah iyo soo jeedinta, oo ay ku jiraan Xbox Live Gold, kaas oo siiya marin u helka ciyaartoy badan oo khadka ah oo bixiya sacab muggiis oo ciyaaraha bilaashka ah si loo soo dejiyo oo loo xafido bil kasta.
Aan falanqeyno mid kasta oo ka mid ah cunsurradaas. Bilawga, maktabadda Xbox Game Pass waxa ka buuxa ciyaaro la ciyaaro, laga bilaabo ciyaaraha Xbox 360 ilaa Xbox-kii ugu dambeeyay, iyadoo ciyaaro cusub lagu soo daro mar walba.
Intaa waxaa dheer, waxay siinaysaa gelitaanka koobabka EA Play sida FIFA 21 iyo Knockout City. Si kastaba ha noqotee, sawirka ugu weyn ee maktabadda Xbox Game Pass waa in cinwaannada Xbox ee cusub ee lahaanshaha ahi ay halkaas yimaadaan laga bilaabo maalinta koowaad.
Tani waxay ka dhigan tahay in marka Halo Infinite yimaado dhowr toddobaad gudahood, macaamiisha Xbox Game Pass waxay awoodi doonaan inay isla markiiba ciyaaraan iyada oo qayb ka ah isdiiwaangelintooda.
Marka € 1 / € 1 bishaadu dhammaato, isu-diiwaangelinta sannadlaha ah ee Xbox Game Pass Ultimate waxay ku kacaysaa qiyaastii € 139.99 / € 194.59 (in kasta oo saddex bilood iyo bille ah is-diiwaangelinta la heli karo).
Waxay u muuqan kartaa mid qaali ah, laakiin dhab ahaantii waa qiimo fiican oo lacag ah markaad tixgeliso nooca cusub ee Xbox, sida Halo, kaas oo ku kacaya € 60 / € 50. Taladayda? Haddii aad leedahay Xbox-ka, Game Pass Ultimate waa iibsi lama huraan ah.
Ma waxaad u raadineysaa hadiyadda Kirismaska ​​​​ugu fiican ee taageeraha Fortnite ama Rocket League noloshaada? Markaa hubaal waa inaad tixgelisaa tan ugu fiican. Xbox Series S Fortnite iyo Rocket League xidhmada hadda € 299 ee GameStop gudaha Maraykanka iyo 249.99 XNUMX at ee Amazon UK.
Waa in la ogaadaa in xidhmada Amazon UK ay diyaar u tahay dalabka hore wakhtigan oo aan la bilaabi doonin ilaa Diseembar 13, laakiin xidhmada GameStop waa diyaar hadda.
Haddaba maxaad ku helaysaa qiimahan? Xidhmada waxaa ka mid ah Xbox Series S console (kaas oo kaliya € 249.99 / € 299), Xakamaynta Wireless Xbox, Fortnite bilaashka ah iyo soo dejinta ciyaarta Rocket League, Xawaaraha Sare ee HDMI cable, xadhig koronto, iyo laba baytari AA ah si ay kuu sii wadaan.
Laakiin, qabashada dhabta ah waa Rocket League iyo nuxurka Fortnite ee lagu soo daray. Xirmadan waxaa ku jira xidhmada Midnight Drive ee Fortnite, oo ay ku jiraan Dharka madow ee Skully, Dark Skully Satchel Back Bling, Splitter Pickaxe, iyo 1,000 V-Bucks.
Waxa jira waxyaabo badan oo ka kooban Rocket League sidoo kale, oo wata Baabuurka Purple Masamune, Kobcinta Wave Virtual Purple, Purple Zefram Wheels, iyo 1,000 Roket League credits oo lagu daray xidhmada. Si kastaba ha noqotee, waxaa xusid mudan in xirmadan aysan ku jirin Fortnite: Badbaadinta Adduunka (laakiin si kastaba aad uma wanaagsana).
Haddii aadan haysan karin Xbox Series X Cyber ​​​​Isniinta, xidhmadan Xbox Series S runtii waa mid mudan in la tixgeliyo.